ပျော်ရွှင်ဖွယ် ၁၀ နှစ်ပြည့်မြောက် Kindle, အီလက်ထရောနစ်စာဖတ်ခြင်းတော်လှန်ရေး | Gadget သတင်း
Wearable devices များ
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ၁၀ နှစ်မြောက် Kindle အီလက်ထရောနစ်စာဖတ်ခြင်းတော်လှန်ရေး
Ruben gallardo | | အမေဇုံ, စာဖတ်သူများ
စားသုံးသူနည်းပညာကဏ္inတွင်စျေးကွက်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်ကုမ္ပဏီများရှိသည်။ Apple သည် smart mobile နှင့် the တက်ဘလက် သို့မဟုတ် Tesla လျှပ်စစ်ကားများ - ယခု ထရပ်ကားတွေနဲ့စမ်းပါ- ။ သို့သော်gရာမအမေဇုန်သည်အများဆုံးလွှမ်းမိုးသောကဏ္ one တစ်ခုတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည် - အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်များနှင့်အတူတ.
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်ကစျေးကွက်တွင်ဂျပန်ဆိုနီမှသော်လည်းကောင်း၊ ပင်လျှင်သော်လည်းကောင်းရွေးစရာများစွာရှိသည် စပိန် Grammata ပေးသောရွေးချယ်စရာများ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Amazon Kindle မည်သို့ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိသောကြောင့်၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည့်အရာအားလုံးအားသုံးစွဲသူများအားလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ eReader ကိုအကြောင်းအရာများဖြည့်ရန်အခြားကုမ္ပဏီများကမည်သည့်ရွေးချယ်မှုများကိုပေးခဲ့သနည်း။
2 အဓိက 'ဟာ့ဒ်ဝဲ' တိုးတက်မှုများ
3 ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုး - အမေဇုန်ရောင်းရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်
4 Kindle ၏အဓိကအောင်မြင်မှု - စာအုပ်များနှင့်ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုများစွာ
5 ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသည့်ပလက်ဖောင်း - လူတိုင်းတွင် Amazon တွင်စာအုပ်ရှိသည်
6 Amazon Kindle တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်များ
6.2 ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်မဟုတ်သောစာအုပ်များ -
ဒီ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း၊ Kindle သည်အီလက်ထရောနစ်မှင်ကဏ္inတွင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသောနံပါတ်တစ်နေရာတွင်ရှိသည်။ အပျော်ဆုံးစာဖတ်သူများသည်သင်နှင့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထက် ပို၍ သယ်ဆောင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ကိုသိကြသည်။ နောက်ကျောတွင်ကိုယ်အလေးချိန်မလိုဘဲ၊ မျက်လုံးကိုငြီးငွေ့စေခြင်းမရှိသော၊ အိမ်တွင်စင်ပေါ်များကိုဖြည့်ရန်မလိုဘဲ virtual library တစ်ခုကိုခွင့်ပြုသည့်နည်းပညာ -e-Ink ။
ထိုနည်းတူစွာအမေဇုံမှမည်ကဲ့သို့ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရမည်ကိုလည်းသိသည် အဆိုပါ Multiplatform အပေါ်အလောင်းအစား။ သင်၏ Kindle ကိုအိမ်တွင်ထားခဲ့ပါကသင်မည်သို့ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်မည်နည်း။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီး၏စက်ပစ္စည်းနှင့်ပလက်ဖောင်း၏မျက်နှာသာပေးသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားကဏ္ the ရှိ operating system တစ်ခုစီတွင်တိကျသောအက်ပလီကေးရှင်းများရှိရန်ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဓိက 'ဟာ့ဒ်ဝဲ' တိုးတက်မှုများ
Kindle platform သည်အစွမ်းထက်သည်။ သို့သော်၎င်းကိရိယာများသည်အခါအားလျော်စွာမြှင့်တင်သင့်သည်။ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်သည်ကဒ်များကိုမည်သို့ကောင်းစွာကစားရမည်ကိုအမြဲသိသည်။ ဒီ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလူကြိုက်များတဲ့အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်စာဖတ်သူရဲ့ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ပထမဆုံးမော်ဒယ်များတွင် QWERTY ကီးဘုတ်ရှိသည် အလွယ်တကူမှတ်စာစေရန်အရာနှင့်အတူဖြည့်စွက်။ သို့သော်အသုံးပြုသူသည် ၂၀၀၇ သို့မဟုတ် ၂၀၀၈ တွင် backlighting သို့မဟုတ် touch screen များကိုမေ့ခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အကုန်ထိထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပါသည့် Kindle Touch - Kindle Touch ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ အမေဇုန်သည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များတွင်ထိုအင်္ဂါရပ်ကိုမစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါ။ ဒါကယနေ့ catalog ဖြစ်ပါတယ် 2017 ခုနှစ်တွင်က4ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များပါဝင်သည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်ဘေးဖယ် left စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်အတွက် Multi-touch panel များကိုထင်ရှားစေရန်။
ထို့အပြင် Jeff Bezos ကုမ္ပဏီမှလည်းဖြစ်နိုင်သောစာဖတ်ခြင်းအခြေအနေအားလုံးကိုစဉ်းစားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အချို့မော်ဒယ်များကိုဘုံအခြေအနေများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ညဘက်စာဖတ်သူများအတွက် backlit e-ink display နှင့်မကြာသေးမီကနိုင်စွမ်းတဲ့မော်ဒယ် ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုး - အမေဇုန်ရောင်းရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်
အကယ်၍ သင်စာဖတ်သူအပြည့်အစုံကိုလိုချင်သည်ဆိုပါကအသုံးပြုသူမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးနိုင်သောကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများကိုသင်အလောင်းအစားပြုလုပ်ရသည်။ စာအုပ်တွေမှာအချိန်မရွေးဒေါင်းလုပ်ချနိုင်အောင် WiFi နဲ့ 3G ဆက်သွယ်မှုတွေကိုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ထို့အပြင် 3G မော်ဒယ်များကိုလူအများလက်ခံနိုင်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ဖြစ်သည် သင်၏ Kindle ၏ 3G ဆက်သွယ်မှုအတွက်အမေဇုံကပေးရသည်; ကုမ္ပဏီသည်သင်ပိုမိုခေါင်းစဉ်များဝယ်ယူရန်နှင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုဂရုစိုက်သည်။
Kindle ၏အဓိကအောင်မြင်မှု - စာအုပ်များနှင့်ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုများစွာ
အကယ်၍ သင်သည် Kindle ebooks ၏ကျယ်ပြန့်သောစာရင်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ဖူးခဲ့လျှင်၎င်းသည်ကြီးမားသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်းမော်ဒယ်များရှိသည်, အတွက် client ကိုသူ့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Amazon ၏အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်ကိုလျှော့စျေးဖြင့် ၈၀% အထိပေးသောကမ်းလှမ်းမှုသည် ၂၄ နာရီကြာသောကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်သည်။
ခေါင်းစဉ်များကိုအကန့်အသတ်မရှိဒေါင်းလုပ်ချနိုင်သည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်သည်သက်သောင့်သက်သာစာဖတ်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ လစဉ်ကြေး ၉.၉၉ ဒေါ်လာပေးဆောင်ရပြီး၊ သင်သည်သန်းတစ်သန်းကျော်ခံစားခွင့်သို့မဟုတ်ယူရိုတစ်ဒေါ်လာအောက်အတွက်စာအုပ်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ၂ ယူရို စသည်တို့ ဤပုံစံကိုခေါ်သည် Kindle Unlimited.
ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသည့်ပလက်ဖောင်း - လူတိုင်းတွင် Amazon တွင်စာအုပ်ရှိသည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Amazon က၎င်း၏ကဒ်များကိုမည်သို့ကောင်းစွာကစားရမည်ကိုသိသောပြissueနာရှိသည်။ စာရေးဆရာများစွာသည်သူတို့၏အလုပ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးသည့်နောက်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မည်သည့်ထုတ်ဝေသူကိုမှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီနေရာမှာအမေဇုံနောက်တဖန်ကစားသို့ဘယ်မှာဒီမှာ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုသည် ပလက်ဖောင်းအောက်မှာ Kindle တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေရေး။ ဒီလမ်းကြောင်းသုံးပြီးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဟာ downloads ထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အလုပ်၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းများသောအားဖြင့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Amazon Kindle တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်များ
အဆိုပါပေါ်တယ် Mashable မကြာသေးမီကဖော်ပြသည် Kindle ပလက်ဖောင်းအောက်ရှိအချိန်ကုန်ဆုံးအရောင်းရဆုံးစာအုပ်များစာရင်း ဒါကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာပါ။ နောက်တခုကမင်းကိုမင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့မင်းမဟုတ်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့မင်းကိုချန်ထားလိမ့်မယ်။
Shades of Grey of Shades (Shadesy Shades 1)
အမှောင် (Christian Grey2ပြောခဲ့သည့် "Shadesy Shades")
Shadesy Shades လွတ်မြောက်ခြင်း (Shadesy Shades 3)
အိမ်ဖော်များနှင့် Ladies များ - အိမ်ဖော်များနှင့် Ladies များအခြေစိုက်သည့်အရောင်းရဆုံးရောင်းချမှု, ရာသီရာသီအတွက်မျှော်လင့်ထားသောအကောင်းဆုံးဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ (အိတ်ကပ်)
JOHN GREEN မှတူညီသောကြယ်ပွင့် (INK CLOUD) အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်၊
တောရိုင်း (Rocabolsillo ရောင်းသူ)
လူတစ်ယောက်လိုပဲလှော်လှော်ခြင်း (Nordic Books - Captain Swing)
အချစ်၏ဘာသာစကား (၅) ချက် - တည်မြဲသောအချစ်၏လျှို့ဝှက်ချက် (အနှစ်သက်ဆုံး / အနှစ်သက်ဆုံး)
Sniper (American Sniper - Spanish Edition) - ယူနိုက်တက်စတိတ်သမိုင်းတွင်အသေအပျောက်အများဆုံးသောစနိုက်ပါ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ထိရောက်သောလူများ၏အလေ့အကျင့် ၇ ခု - ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ဝေမှု (Company and Talent)
Henrietta ကင်းမဲ့သောဘဝ (ထုတ်ဖော်ခြင်း။ သိပ္ပံ)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » စာဖတ်သူများ » ပျော်ရွှင်ဖွယ် ၁၀ နှစ်မြောက် Kindle အီလက်ထရောနစ်စာဖတ်ခြင်းတော်လှန်ရေး
Xbox One X အသစ်ကဂျပန်မှာမှားယွင်းတဲ့ခြေထောက်ပေါ်စတင်လိုက်ပြီ
Whatsapp ကို download လုပ်ပါ